Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » IATA: Ibu ụgbọ elu ụwa na -achọ uto karịa ike
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ebe njem mba ofesi ka na -ada ada nke ukwuu, ụgbọ elu ndị njem pere mpe na -enye ike afọ maka ibu. Mkpuchi ihe ọkọnọ ga -akawanye njọ ka azụmahịa na -aga n'ihu ịkwalite mmepụta.
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ, tụrụ na ibu ibu-kilomita (CTKs), ruru 7.7% ma e jiri ya tụnyere Ọgọstụ 2019 (8.6% maka arụmọrụ mba ụwa).
Ọganihu nke uto jiri nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere July, nke hụrụ ịrị elu ịrị elu 8.8% (megide ọkwa COVID-19 tupu).
Mweghachi nke ikike ibu kwụsịrị na August, gbadara 12.2% ma e jiri ya tụnyere Ọgọstụ 2019 (13.2% maka arụmọrụ mba ụwa). N'ọnwa n'ọnwa, ikike dara site na 1.6%-mbelata kachasị kemgbe Jenụwarị 2021.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) wepụtara data Ọgọst 2021 maka ahịa ụgbọ elu ikuku zuru ụwa ọnụ na -egosi na ọchịchọ ahụ gara n'ihu na -eto eto siri ike mana nrụgide na -abawanye.
Dika ntụnyere n'etiti 2021 na 2020 nsonaazụ kwa ọnwa na-agbagọ site na mmetụta pụrụ iche nke COVID-19, belụsọ na ekwetaghị n'ụzọ ọzọ, ntụnyere niile dị n'okpuru bụ ruo Ọgọst 2019 nke gbasoro usoro chọrọ.
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ, tụrụ na ibu ibu-kilomita (CTKs), rịrị elu 7.7% ma e jiri ya tụnyere Ọgọstụ 2019 (8.6% maka arụmọrụ mba ụwa). Ọganihu n'ozuzu ya ka siri ike ma e jiri ya tụnyere ogologo uto ogologo oge gburugburu 4.7%.
Ọnọdụ akụ na ụba na -aga n'ihu na -akwado ibu ụgbọ elu mana ọ na -esighi ike karịa ka ọnwa ndị gara aga na -egosi na mmụba n'ichepụta ihe n'ụwa agbagogoro elu:
Akụkụ mmepụta nke August na-emepụta ihe njikwa njikwa (PMIs) bụ 51.9, na-egosi mmụba dị mkpirikpi iji chọọ ma ọ bụrụ na ụgbọ elu eburu iwu ndị ahụ. Nke a bụ mbelata site na 54.4 na July.
Akụkụ iwu mbupụ ọhụrụ nke Ọgọstụ nke PMI dị mma maka ibu ụgbọ elu, n'agbanyeghị na -akwadochaghị karịa ọnwa ndị gara aga. Mgbasawanye gara n'ihu na ọkwa ụwa, agbanyeghị, enwere nkwekọrịta na akụ na ụba na -apụta.
Nsonaazụ ịre ahịa ga-adị ala tupu oge azụmaahịa kacha elu na njedebe afọ. Nke a dị mma maka ibu ụgbọ elu, agbanyeghị ikike mgbochi ọzọ na -etinye nke a n'ihe egwu.
“Ọchịchọ ibu ụgbọ elu nwere ọnwa ọzọ siri ike na Ọgọstụ, ihe ruru 7.7% ma e jiri ya tụnyere ọkwa COVID. Ọtụtụ ihe ngosi akụ na ụba na-arụtụ aka n'oge oke ngwụcha afọ. Ebe njem mba ofesi ka na -ada ada nke ukwuu, ụgbọ elu ndị njem pere mpe na -enye ike afọ maka ibu. Mkpuchi ihe ọkọnọ ga -akawanye njọ ka azụmahịa na -aga n'ihu ịkwalite mmepụta, "ka o kwuru Willie Walsh, obodo ntàDirector General.
IATA: Ibu ụgbọ elu ụwa niile na -achọ ibu karịa ike | Blọgụ akụkọ ekwu, sị:
September 29, 2021 na 20: 20